३० जना सचिवको सरुवा को कहाँ ?
काठमाडौं । ओली नेतृत्वको सरकारले पहिलो पटक विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुको सरूवा गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भारत भ्रमणमा जानुअघि सचिवहरुको सरुवा गरेका छन् । सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटाले सबै सचिवहरुको सरुवा गर्ने नीति अनुरुप सरुवा गरिएको बताएका छन् । उनले ३० जना सचिवको जिम्मेवारी फेरवदल भएको बताए ।
सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव प्रेमकुमार राईलाई गृह, गृह मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटालाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ । त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयमा राजन खनाल पदस्थापन भएका छन् भने प्रधानमन्त्री कार्यालयमै रहेका अर्का सचिव खगराज बराललाई शिक्षा सचिव बनाइएको छ । खनाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सचिव थिए ।
महेन्द्रमान गुरुङलाई सञ्चार सचिव बनाइएको छ । गुरुङ पनि यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थिए । अख्तियारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई लगिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका विष्णु लम्साल रक्षा सचिव बनेका छन् भने प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव शरच्चन्द्र पौडेल योजना आयोगमा पुगेका छन् । त्यसैगरी मधुसुदन अधिकारीलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सचिव बनाइएको छ । अधिकारी यसअघि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा थिए । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहाललाई श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको सचिवको जिम्मा दिइएको छ । नेपाल ट्रष्ट कार्यालयमा कार्यरत अर्जुनकुमार कार्कीलाई पुनिर्निर्माण प्राधिकरणको सचिव बनाइएको छ ।
वनसचिव डा. युवकध्वज जीसीलाई कृषि मन्त्रालयको सचिव बनाइएको छ भने पशुपंक्षी सचिव विश्वनाथ ओलीलाई वन मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ ।
अर्थमन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीलाई उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ भने शिक्षा सचिव मधुप्रसाद रेग्मीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । त्यस्तै प्रदेश १ का कामु मुख्य सचिव यादवप्रसाद कोइराला काठमाडौं महानगरपालिकामा सरुवा भएका छन् ।
प्रकाशित २३ चैत्र २0७४ , शुक्रबार | 2018-04-06 08:35:50